सुशान्त प्र’करण: जे’लमुक्त भएर घर फर्किएपछि रिया चक्रवर्तीले के भनिन्? आमाले गरिन् गु’नासो – Articles Nepal
२४ असोज काठमाडौं: सुशान्त सिंह राजपुत आत्मह’त्या के’समा जोडिएको ड्र’ग्स मा’मिलाकी मुख्य आ’रोपी रिया चक्रवर्तीलाई उच्च न्यायालयले बुधबार रि’हा गरेको छ। रियालाई एनसिबीले एक महिनादेखि मुम्बईको बाइकुला जे’लमा न्यायिक हि’रासतमा राखेको थियो। एक महिनापछि घर फर्किँदा रियाले के कस्तो प्रतिक्रिया जनाइ’न्? भन्ने बारेमा उनकी आमा सन्ध्या चक्रवर्तीले दुख पोखेकी छन्।
एउटा प्रमुख स’माचार मि’डियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै रियाकी आमा भन्छिन्, – जब हि’रासतबाट छु’टेर रिया घरमा आई, अचम्म मान्दै उनले भनी- `तपाईंहरू किन यति धेरै नि’राश हुनुभएको? एक न एक जनाले यो सबै भो’ग्नु त थियो नै। मानिसहरूलाई सन्तुष्ट पार्न पु’लिसले एक जनालाई गि’रफ्तार गर्नु नै थियो। त्यसको मूल्य मैले चु’काए। हामीले बलियो भएर यो ल’डाइँ ल’ड्नु छ। तपाईंहरू दु’खी नहुनुस्।´
आफ्नो छोराछोरी जे’लमा बसेको बेला आफ्नो परिवारमै अ’शान्ति फैलिएको बताउँदै रियाकी आमाले आफूलाई आत्मह’त्याको सोच धेरैपटक आएको भनिन्। त्यतिबेला आफ्नो भोक निन्द्रा सबै ह’राएको र मानिसहरूले आफ्नो परिवारलाई ब’र्बाद गरिदिएकोमा रियाकी आमाले दु’खेसो पोखिन्।
रियाले म’जबुत भएर यो झु’टो आ’रोपको ल’डाइँ ल’डिरहेको र आफ्नो गरिमा कायम राखेकोमा आफूलाई आफ्नो छोरीमाथि गर्व भएको रियाकी आमाले बताएकी छन्।
Previous Post: आइपिएल: दिल्लीले दर्ता गर्यो पाँचौ जित, राजस्थान पराजित; सन्दिप अझै दिल्लीको बेन्चमै सिमित
Next Post: पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप २ हजार ६७२ कोरोना संक्रमित